Ogaden News Agency (ONA) – Sirta culus ee Xaakhaam Xaajo
Sirta culus ee Xaakhaam Xaajo
Posted by ONA Admin	/ June 22, 2011
Ma istaahilin inaan waqti iskaga lumino qoraalada uu is-moodsiinayo jaajuuska wax ku qorqora boggaa inuu guul ku gaaray soo qoridda waxyaabo uu ku tilmaamayo inay tahay sir uu kala soo dhex baxay waraaqaha ay isu dirayaan madaxda jabhadda.
Ugu horeyn halgamaha JWXO ma mooga doorka uu sirdoonka Itobiya ku leeyahay arintan iyo in shabakaddan ay tahay qayb ka mid ah shirqoolada loo maleegayo shacabka S.Ogadenya. sidoo kale in cadawga markuu ka quustay inuu JWXO kaga adkaado goobaha dagaalka uu bilaabay dagaal xagga dacaayadda ah oo hadafka uu ka leeyahay ay u cadahay halgamaaga JWXO.
Waxaan ogsoonahay in labadii sanee ugu dambaysay uu cadawga xoogga saaray kuna guuldareystay inuu shacabka u kala qaybiyo ururo iyo beelo iska soo horjeeda. Waxaan ogsoonayn isku dhacyadii hadafka lahaa ee la maareyn kari waayay ee kooxdii Ajo-gudhay ay gudaha ka fulinayeen iyo isku daygoodii ahaa inay abuuraan garab ay u bixiyaan ONLF oo isla hadhaagii Itixaadka ah oo la dagaalama CWXO si loo yidhaahdo waxaa dagaal uu ka dhex socdaa laba garab oo ONLF ah. Waxaan ku arki jirnay shabakaddan qoraaladii sidaa ahaa ee marwalba lagu soo qori jiray. Waxaan ogsoonayn doorkii fitna abuurka ahaa ee Cabdi iley uu ka fashiliyay Xaajo markuu runta ka sheegay inay iyagu dileen soona bandhigay maydkii Alaha u dambi dhaafee Dr. Doolaal. Waxaan ogsoonahay isku dayga ilaa maanta ay wadaan inay u kala saraan shacabka beelo iyo qabaai’il kala dan ah oo iska soo horjeeda. Shirqoolkii noocaa ahaa oo idil ee gumaysiga uu ku fulinayay Xaajo waa lagu soo guuldareystay.
Waxaa hadda socota mashruuc ah – Sir Culus – iyo hebel ayaa sidaa qoray, oo cadawga uu ka soo minguuriyay barnaamijkii Wikkileaks ee fashilyay arima farabadan oo si hoose loogu maleegayay caalamka. Waxaana ka mid ahaa arimaha uu soo bandhigay Wikkileaks cabsida uu ka qabo Wayaanaha halganka shacabka S. Ogadenya iyo ururka ONLF. Wikkileaks waxaa lagu soo bandhigay shirqooladii ay maleegayeen waxa loo yaqaano caalamka qarsoon (the underworld), taasoo ka cadhaysiisay dawladihii laga fashilyay, gaar ahaan Mareykanka oo ka cabsaday in la aamini waayo maadaama wixii la’isla qasan jiray banaanka ay soo dhegeen ragiisa.
Iyagoo ku dayanaya arintii Wikkileaks ayuu cadawgka khashiinka ah oo adeegsanaya Xaajo bilaabey waayadnba mashruucan ah –Sir-Culus- oy leeyihiin waxaan helnay qoraalo muhiim ah oo madaxda JWXO ay is-weydaarsanayeen. Shacabka ay ugu talagaleen inay ku jahawareeriyaan arintan ayaa leh kalmada kama dambaysta ah, umana muuqato mid ka gadmaysa oo ka duwan mashaariicdii gumaysiga iyo xaajo ee horeyba u fashilmay.
Waxaa hubaal ah isku day kasta oo gumaysiga uu damcay inuu ku wiiqo midnimada shacabka iyo habsami u socodka halganka inay JWXO ka dhaxashay guul iyo horumar. Jaajuuskan lagu adeeganayona waxaan colaad iyo nac ahaynoo uu ka korosaday isku dayadiisii hore ma jirin, beentan loo soo dhoodhoobayna kuwii ka horeeyay waxba ma dooriso.
Guusha shacabka gobanimadoonkaa iska leh.
war waxa D.qoodhiga ah indha adakaa ma bisad baa?
cawradooda ayaa banaanka taalla, qudhunka dhiigya cab males kabaha u sida.